किन भेटेनन् ओली-प्रचण्ड ? खटपटको आशंका | CHALKHEL.COM
Home पत्रपत्रिकाबाट किन भेटेनन् ओली-प्रचण्ड ? खटपटको आशंका
किन भेटेनन् ओली-प्रचण्ड ? खटपटको आशंका
वाम गठबन्धनका दुई शीर्ष नेता एक:अर्काको भूमिकाप्रति आशंका गर्न थालेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच केही दिनयता प्रत्यक्ष भेटघाटसहितको संवाद हुन नसक्दा आशंका र अविश्वास जन्मिएका छन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा रामकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन् ।
गठबन्धन निर्माणकै बेला प्रस्ट चित्र नआइसकेकाले पार्टी एकतापछिको नेतृत्व व्यवस्थापनमा विभिन्न अड्कलवाजी हुँदै आएका थिए । सरकारको नेतृत्व, पार्टी नेतृत्व, आलोपालो सरकारलगायत चर्चा चलेका थिए । दुवै नेताले आफूहरूका लागि व्यक्तिगत पद÷प्रतिष्ठा पार्टी एकताभन्दा ठूलो हुन नसक्ने बताउँदै आइरहेका थिए । २९ मंसिरमा बबरमहलको एक निजी निवासमा भएको छलफलबाहेक पार्टी एकताका विषयमा दुई पार्टीका शीर्ष नेताबीच प्रत्यक्ष संवाद हुन नसकेपछि अविश्वास चुलिएको छ ।
Previous articleरसुवा नाकामा ‘ज्वाइन्ट एक्सन सेन्टर’
Next articleतातोपानी नाकामा चिनियाँ प्रस्ताव र नाका खुल्ने ३ आधार